Archive du 20190904
Mafana ny toe-draharaha Minisitra iray teo aloha hosamborina…
Ho avy ny fisamborana na fampiantsoana minisitra iray tamin’ny andron'ny HVM, raha ny loharanom-baovao azo. Mety ho anio alarobia no hanatanterahana izany.
Raharaha Ampefiloha Nankasitraka ny fihetsiky ny fitondram-panjakana ny CNIDH
Mahavelom-bolo ny mpiaro ny zon’olombelona ny fanapahan-kevitry ny fitondram-panjakana teo anatrehan'ny fanambarana nataon'ny minisitra miandraikitra ny filaminam-bahoaka ny 27 aogositra lasa teo,
Fanoherana Sarintsarina mpanohitra no tian`ny fitondrana hapetraka
Mandringa ny famolavolana ny lalàna mifehy ny mpanohitra izay tadiavin`ny fitondrana holaniana amboletra eny amin`ireo parlemantera roa tonta.
Rivo Rakotovao “Natao hihaino ny fitarainan’ny olona ny loholona”
Natao hihaino ny fitarainan’ny olona sy ireo vondron’olona na antoko politika hafa, ny mpahay toekarena, ny ara-tsosialy sy ireo olona hitondra hevitra hanatsarana ny faritra misy azy tsirairay avy ny antenimierandoholona.
Fifidianana ben’ny tanàna Mbola mangina ny fanaterana ny antontan-taratasin’ireo kandida
Maro ireo kandida no efa nilaza fa hirotsaka hofidiana ben’ny tanàna.
Tarika Herdimann Hiverina hiaka-tsehatra
Tany amin’ny taona 1988 no nahenoana ny tarika Herdimann farany. Raha tsiahivina dia tao anatin’ny fifaninanan-kira “Maharitr’afo” izay nokarakarain’ny onjam-peom-pirenena no naha voafidy ny tarika ho talenta vao na “revelation”.
Apostoly Tsaratsara Tsy misy ifandraisany mihitsy amin’i Marc Tatandraza
Nitondra fanamarihana ny Apostoly Tsaratsara sy mpiara-miasa aminy fa tsy misy ifandraisany na akaiky na lavitra amin’i Marc Tatandraza mihitsy izy ireo ka ahitsy ny vaovao nivoaka an-gazety naha voatonontonona ny anaran’ny Apostoly Tsaratsara ao anatin’ny vaovao mikasika an’i Marc Tatandraza.
Tsena eto Antananarivo Mila politika fanarenana goavana
Efa manakaiky ny fifidianana ben`ny tanàna ary efa maro ireo nilaza hirotsaka, indrindra eto an-drenivohitra. Maro ireo sehatra mila jerena akaiky toy ny tsena.
Fitantanana ny rano eto Iarivo Mandrindra asa ny AUE sy ny Boriborintany faha-4
Nampivory ny AUE (Association des Usagées de l’eau) miisa 184, izay mitantana fotodrafitrasa toy ny paompin-drano sy ny toerana fanasan-damba ny teo anivon’ny boriborintany fahefatra,
Famonoana afo Maro ireo fitaovana azo ampiasaina
Mitohy hatrany ny fikarohana ataon’ireo manampahaizana amin’ny ady amin’ny afo eto amintsika.
Telma sy orinasa Star Hampiala voly ny mpanjifa
Tafiditra tanteraka ao anatin’ny fialan-tsasatra lehibe isika ankehitriny. Tsy vitsy ireo efa lasa nihazo ny faritra hahafahana miala voly kely. Ho an’ireo mbola miandry fanadinana kosa dia misy ny lalao azon’izy ireny handraisana anjara mba hampiala voly ny saina vetivety.
Vehivavy mpandraharaha ao Boeny Hiara-kiasa amin’ny banky BNI
Hiara-kiasa amin’ireo vehivavy mpandraharaha ao Boeny ny banky BNI Madagascar.
Taksiborosy manararaotra ny fahatongavan’ny Papa Ho hentitra ny sazy omen’ny ATT
Tsy tokony hanararaotra amin’ny fahatongavan’i Papa François eto amintsika, amin’ny fampiakarana sara-dalana ireo taksiborosy mampiasa ny lalam-pirenena rehetra eto amin’ny nosy,
Mpivarotra voninkazo eny amin’ny tamboho HJRA Hafindra eny By-Pass ?
Nandeha ary niely ny feo tamin’ireo mpivarotra voninkazo etsy amin’ny tambohon’ny hopitaly Hjra Ampefiloha fa halana amin’ny toerany hivarotany izy ireo.
Minisiteran`ny fanajariana ny tany sy ny toeram-ponenana Maniry fitaovana ahafahana mandrindra fotodrafitrasa
Ao anatin`ny fanatanterahana ny politika ankapoben`ny fanjakana ny IEM ny fitondrana amin`izao. Vola mitentina 60 tapitrisa ariary no hahetsiky ny minisiteran`ny fanajariana ny tany sy ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy (MATHP) hamolavolana sy hananganana fotodrafitrasa ao anatin`ny vina IEM.
Fanaovana maloto ankalamanjana Mbola za-dratsy ny Malagasy
Tontosa omaly ny fifanaovan-tsonia fiaraha-miasa teo amin’ny minisiteran’ny angovo, ny rano ary ny akoranafo sy ny UNICEF ary ny masohivohon‘i Korea tetsy Ampandrianomby.